Tarika sedraim-pahoriana :: Rovitra tanteraka ry Mahaleo fa maty ihany koa i Dadah • AoRaha
Tarika sedraim-pahoriana Rovitra tanteraka ry Mahaleo fa maty ihany koa i Dadah
Toy ny nilatsaham-baratra ireo mpanakanto sy ny mpankafy ny tarika Mahaleo. Nodimandry, omaly, teo amin’ny faha-65 taonany, tany amin’ny toeram-ponenany, any Antsirabe, Andrianabela Aakotobe na I Dadah Rabel, ao amin’ny tarika. Vao tapa-bolana izay no nilaozan’I Fafah izy ireo dia izao lasa any amin’ny varo-tsy mifody izao indray I Dadah. Manjombona tanteraka ny tontolon’ny zavakanto malagasy, amin’izao fotoana izao.
«Tampoka loatra, tena tsy nampoizina ilay izy. Isan’ny tena nahasosotra anay ny famoahana tao amin’ny tambajotran-tserasera ny mahakasika ity fahalasanana tampoka ity. Nirarianay mba izahay tarika Mahaleo na ihany koa ny fianakaviana tena akaiky azy no nanambara izao zavatra izao», hoy i Bekoto tamina feo feno alahelo, omaly tamin’ny findainy, raha nantsoina. Efa namonjy an’Antsirabe omaly, ireo mpikambana avy ao amin’ny tarika Mahaleo, mba hifankahery amin’ny fianankaviana, araka ny vaovao azo,. «Tsy mbola fantatra ny fandaharam-potoana izay apetraky ny fianakaviana mahakasika ny fiandrasana ny nofo mangatsiakan’i Dadah, na hoentina aty Antananarivo izy na hijanona any Betafo », araka ny nambaran’i Bekoto hatrany.
Raha tsiahivina dia i Dadah no namaky sehatra voalohany tamin’ ireo akanga sisa nanamboran’ny tarika Mahaleo taorian’ny fahafatesan’i Fafah. An-dranomaso no niangaliany ireo hirany. Indrisy anefa, lasa namonjy ireo mpikambana efa nialoha lalana azy ihany koa i Dadah. Raha ny fanambaràna nataon’ny tarika Mahaleo, dia tsy mbola fantatra mazava ny tena anton’izao fahafatesana tampoka izao. Araka ny loharanom-baovao hafa indray dia fahatapahan’ny lalan-dra no nahazo azy. Misy kosa ireo milaza fa fijanonan’ny fo tampoka no nahavoa azy.
Raha ny loharanom-baovao hatrany, dia mbola namonjy fetim-pianakaviana i Dadah Rabel, omaly. Tokony ho tamin’ny efatra ora hariva teo anefa izy no nindaosin’ny fahafatesana tampoka.
Poeta, manana aingam-panahy miavaka
Teraka tamin’ny 23 jona 1954 i Dadah. Namela manano tena sy kamboty mianadahy, dia i Agy Rakotobe sy i Arlette Rakotobe, ity andrin’ny tarika Mahaleo ity. Niaina tao anatin’ny zavakanto tanteraka izy.
Isan’ny mandona ny fo ireo tonon-kirany ary ankafizin’ny maro tokoa. Andrarezin’ny famoronan-kira ny lehilahy. Tsy ny tarika Mahaleo ihany no nahafantarana an’ity talenta miavaka ity fa manana rakikira iray hiarahany amin’i Inah izy ary manana fampiaraham-peo marobe amin’ireo mpanakanto maro.
Ankoatra ny fihirana dia dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana ny loha sy ny hazondamosina “Neuro Traumatologue» izy. “Tato amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona no namaranany ny asan’ny mpitsabo sy nandehanany nisotro ronono tamin’ny taona 2018”, araka ny nambaran’ny mpitsabo iray niara-niasa taminy.
Goavana ny fahabangana navelan’i Dadah ao amin’ny tarika Mahaleo, indrindra fotoana vitsy monja taorian’ny nahalasanan’i Fafah. Isan’ireo mpikambana fototra tao amin’ny tarika ity mpanakanto ity ary iray tamin’ireo nanangana izany niaraka tamin’i Dama.
Nitondra an’i « Ianao», sy «Vololona» izy, hira voalohany nampalaza an’ny tarika Mahaleo. Anisan’ny hahatsiarovan’ny maro an’i Dadah ny tsikiny sy ny fahaizany mifandray amin’ny rehetra. Indrisy anefa fa namonjy an’i Raoul (maty tamin’ny 3 septambra 2010) sy Nônô (maty tamin’ny 29 aogositra 2014) ary Fafah (nodimandry tamin’ny 20 oktobra 2019) ihany koa i Dadah. Nihena iray indray, araka izany, ny talenta mandrafitra ity tarika anisan’ny be mpankafy ity.
Izahay eto amin’ny gazetyAo Raha dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Dadah sy ny tarika Mahaleo ary ny tontolon’ny kanto malagasy, izay nilaozany.
Gas’in Praise :: Nafana ny fihaonana tamin’ ny mpankafy tetsy Isotry